Internet privacy ကာကွယ်ခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Internet privacy ကာကွယ်ခြင်း
Internet Age မှာ privacy invasion တွေ ရှိ လာ ပါ တယ်။
web site တွေ က ကို သွား လေ ရာ ကို လိုက် ပီး track လုပ် တယ်။ eg How facebook tracks users
Social sites တွေ က ကို activity တွေ monitor ပီး အ ခြား company တွေ ကို ရောင်း စား တာ တွေ။
ဆို တာ တွေ လဲ ရှိ ကြ ပါ တယ်။ email account message တွေ ။ chat history တွေ. private sharing လုတ် ထား တဲ. နိုင် ငံ ရေး (keyboard hero) လုပ် ထား တာ တွေ ပါ သွား မှ။
Cloud service တွေ က မြန် မာ လူ မျိုး တွေ အ တွက် အ ဆင် ပြေ စေ တာ ကိုး။ လူ တိုင်း internet cafe မှာ ထိုင် online service (google, facebook, youtube, skydrive, dropbox,.. ..) တွေ ဝင် လိုက် တာ နဲ. ကို. computer လို ဖြစ် သွား တာ ဆို တော့။ လူ တိုင်း computer/internet မ ဝယ် နိုင် ရင် တောင် OK တာ ပေါ့။
fake name, age, photo တွေ ပဲ သုံး သုံး ကို usage လုပ် တာ က နေ data mining လုပ် နိုင် နေ သေး တာ ပါ ပဲ။ ထား ပါ တော့ ကို. age ကို မ ဟုတ် တာ ပေး ထား ပေ မဲ. resume လေး ဒီ cloud service (eg google drive) မှာ save တင် ထား လိုက် မယ် ဆို တာ နဲ. ....
Internet privacy နဲ. ပတ် သက် တာ တွေ ဒီ thread မှာ ဆက် ပီး ဆွေး နွှေး ကျ ပါ။
ဘာ တွေ သ တိ ထား ရ မ လဲ ဘယ် လို ကာ ကွယ် ရ မ လဲ ဆို တာ တွေ။
ကိုဂျိန်း, ကိုလင်း1z, မျိုးဟန်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, မြင့်မိုရ်, g00gle, pannuko, tu tu, yelinoo
ပြန်စာ - Internet privacy ကာကွယ်ခြင်း
ကျွန်တော့်အထင် ကာကွယ်ဖို့က မလွယ်ဘူး ထင်တယ်။ Ads blocker တွေ သုံးရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာ စရာတွေ့ရတယ်။ Block Facebook trackers, Google analytics စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်တော့ Google analytics မှာ ကိုယ့်ကို track လုပ်နိုင်ပြန်ရော။
Facebook ကလဲ အကောက် အတုပဲ လုပ်လုပ်၊ နာမည် ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ကိုယ်ပိုင် IP နဲ့ သုံးရင် အကောက် အစစ်က Friends တွေကိုတောင် suggestion ပေးတယ်။ ဘဏ်တွေလိုပဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ IP ကို မှတ်ထားတယ် ထင်တယ်။
Google သူလဲ တော်တော်ဆိုးတယ်။ သူက services များတော့ ထိန်းရတော်တော် ခက်တယ်။ Gmail မသုံးဖူးထားဦး၊ Google Doc သုံးရင် အကောက်က sync ထားပြန်ရော၊ Youtube ဆိုလဲ Google+ နဲ့ ချိတ်ဖို့ တချိန်လုံး လာပြောနေတာလို့ စိတ်ရှုပ်တာနဲ့ ချိတ်လိုက်မိရော။ ပိုဆိုးတာက Email search box နဲ့ Google Search ကို ဘာလို့ ချိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေလဲ မသိဘူး။ Google Search ကတော့ လက်လန်တယ်။ Personalized search က မလွတ်ဘူး။ Settings ကို Global ထားလဲ personalized results ပဲ ထွက်တယ်။ နောက် Windows 8, Ubuntu တို့, mobile တွေ အကုန်ချိတ်ထားတော့ တခုခုဖြစ်ရင် ငါမလုပ်ဘူး ငြင်းလို့တောင် ရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုတော့ စိတ်နာနာနဲ့ သုံးနေတယ်။
နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူလဲ စိတ်မချရဘူး။ Google ကို Users data request လုပ်တာ အများကြီးပဲ။ Google Transparency report မှာ ၂၀၁၂ - ၆ လ report မှာ Singapore ဆို ၈၀၊ US ဆို 7,000 ကျော်ရှိတယ်။ နောက် ပိုများလာဖို့ပဲ ရှိတယ်။ Request လုပ်တိုင်း Google က ပေးမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ တော်တော်များများက 70% လောက်ထိကို Google က ပေးတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ (မြန်မာပြည်တော့ မပါသေးဘူး) အထူးသဖြင့်တော့ Pirates တွေ သတိထားရမှာပဲ။
တလောက Torrentfreak မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ Video share လုပ်တဲ့သူကို တရားစွဲတာ။ သူက adult site မှာ တရားဝင် ပိုက်ဆံပေး အကောက် ရှိတယ်။ သူ site က video ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး share လုပ်တယ်ပေါ့။ သူမသိတာက Video မှာ သူ့အတွက် code လေး တစ်ခု encrypt လုပ်ပြီး ထဲ့ထားတယ်။ သူ share လုပ်လိုက်တဲ့ videos မှန်သမျှ အဲဒီကုဒ် ပါနေပြီး ဘာမှ ငြင်းလို့ မရဘူးပေါ့။
နောက် ISP - data6လ ကနေ တစ်နှစ်ထိ traffic အကုန် store လုပ်ထားတယ်။ (မြန်မာပြည်တော့ မသိပါ) ပြသနာဖြစ်ရင် မလွတ်ဖို့ပဲ များတယ်။
Ads အတွက်တော့ Adblock, Albine - Do not track+, ghostry စတာာ သုံးလို့ ရတယ်။
IP ကတော့ မလွယ်ဘူး။ IP ပြောင်းတယ်ထားဦး - Flash သုံးနေရင် flash player ကနေ ပေါ်နိုင်သေးတယ်။
VPN - ဘယ်လောက် လုံခြုံလဲက မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ Hidemyass VPN သုံးတဲ့ file sharer ကို ဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့။
ကိုယ်ပိုင် data ကတော့ ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက်ရမှာပဲ။ အရေးကြီးတာ အကောက် သီးသန့် တစ်ခုမှာထား။ အဲဒီ အကောက်ကို မလိုအပ်ရင် ဘာမှ မသုံးနဲ့။
အရေးကြီး data ဆို encrypt လုပ်ပေါ့။ Photo အောက်၊ ဖိုင်ဖွက်တာတို့ ဘာတို့ မဟုတ်ဘူးနော်။
Google ဆို Web history - turn off လုပ်ထားပေါ့။ Dashboard ထဲဝင် မလိုတာ အကုန်ဖြုတ် (authorized sites, history, etc)
တခြား track မလုပ်တဲ့ duckduckgo တို့၊ blekko တို့ သုံးလို့ ရတယ်။ သို့သော် - results က မဆိုးပေမဲ့ တချို့ဟာလေးတွေ အားနည်းချက် နည်းနည်းဆီနဲ့ နောက်ဆုံး google ပဲ ပြန်သုံးဖို့ များတယ်။
Public computer ဆို log out လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့ပေါ့။ Virus ရှိတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ဆို မသုံးနဲ့။ ကိုယ့် email ပါသွားရင် spam mail က တစ်သက်လုံးပဲ။ ကျွန်တော့် အီးမေးတောင် တစ်နေ့ ၃-၄ စောင် အမြဲ ရှိတယ်။ ဘာမှ လုပ်လို့လဲ မရဘူး။ ဒီတိုင်း spam box ထဲမှာ။
အကောင်းဆုံးကတော့ မဟုတ်တာ မလုပ်နဲ့ပေါ့။
ကိုဂျိန်း, ကိုလင်း1z, မျိုးဟန်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, Bayint Naung, kyawminkhoung, pannuko, tu tu, yelinoo
ကို g00gle ပြော တာ တွေ က တင် တော် တော် ဆုံ နေ ပါ ပီ။ ကျ နော် က တော့ third party cookie block လုပ် တာ လောက် ပဲ သုံး ဖြစ် တယ်။ duck duck go, bing တွေ က တော့ သုံး ကြည့် ဘူး တယ် ဆို ရုံ ပဲ။ နောက် ဆုံး google ဘူ တာ ပဲ ဆိုက် တယ်။
ခု နောက် ပိုင်း မှာ iOS safari မှာ google နဲ. ရှာ ရင် ဘာ လို. လဲ မ သိ ဘူး location လာ လာ မေး မေး နေ တယ်။ အ ရင် က မ ကြုံ ဘူး ဘူး။ (any iOS users? )
Google ကို request လုပ် တာ တွေ တော့ သ တင်း မှာ ဖတ် ဘူး တယ်။ google ပဲ မ ဟုတ် ဘူး။ Microsoft, Apple တွေ လဲ Gov က တောင်း ရင် တော့ ပေး ရ တယ် ပြော တယ်။ ဥ ပ ဒေ အ ရ ကို။
Apple icloud backup တွေ တောင် encrypt လုပ် ထား တယ် ပြော တာ။ Master key(for decryption) က Apple ရှိ မှာ ရှိ ပီး။ Government request လုပ် ရင် တော့ ပေး တယ် ဆို လား။ အဲ ဒါ နဲ. ပဲ icloud ကို တန်း disable/delete လုပ် ပြစ် လိုက် တယ်။ photo, app data(pdf files), etc တွေ အ ကုန် ဆို တော့။
ကို. computer ကို encrypt backup လုပ် တာ ပဲ ပို ယုံ ရ တယ်။
cloud တွေ က convenient ဖြစ် ပေ မဲ. ယို စ ရာ နေ ရ တွေ က အ များကြီး။ ကို ဘက် က ပဲ ဖြစ် ဖြစ် သူ့ server ကြီး ပါ သွား လို. ပဲ ဖြစ် ဖြစ်။
EU တွေ ဘာ တွေ မှာ တော့ google, Microsoft တွေ ဘာ တွေ ကို စောင့် ကြည့် တာ တွေ ဘာ တွေ ရှိ တယ် ဆို တော့ မြန် မာ မှာ လဲ အဲ လို ဟာ တွေ နောက် ဆို ရှိ သင့် သ လား မ သိ။
google, facebook တွေ က တော့ web platform မှာ တော် တော် strong ဖြစ် တယ် ပြော ရ မယ်။ သူ တို့ ရှိ က တော် တော် ရှောင် နိုင် ရင် မ ဆိုး ဘူး ပဲ ပြော ရ မ လား။ web service တွေ ရဲ. business model က လဲ paid နဲ. တိတ် အ ဆင် ပြေ ပုံ မ ပေါ် ဘူး။ အဲ ဒိ တော့ user privacy info တွေ က ပိုက် ပိုက် ဖြစ် ကုန် ကော။
ဈေး တန် တဲ. subscription ဆို လဲ မ ဆိုး ဘူး ပြော ရ မယ်။
အဲ user data/info ကို တော့ လုံး ဝ မ ထိ နဲ. ပေါ့။ Encryption တွေ ဘာ တွေ ကောင်း ကောင်း support လုပ် ကို တိုင် က လွဲ လို. အ ခြား သူ တွေ access မ လုပ် နိုင် စေ နဲ. ပေါ့. http://arstechnica.com/tech-policy/2...-mail-privacy/
gmail ကြောင့် အ လုပ် ပြုပ် သွား တဲ့ CIA director တောင် ရှိ တယ် တဲ.
privacy က ကိုတစ် ယောက် ထဲ နဲ. လဲ မ ရ ဘူး ဗျ။ communication လုပ် ပီ ဆို က တယ် က ၂ ဦး ၂ ဖက် လုံး က လိုက် နာ မှ။ (email, online chat, etc...)
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ Bayint Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ကိုလင်း1z, မြင့်မိုရ်, bagothar85, g00gle, pannuko, tu tu, yelinoo
Ask Location က တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျ။ iOS မှာတော့ ဘယ်လိုလဲ မသိဘူး။ Windows 8 မှာ တော့ အိမ်ကို ကွက်တိ ပြတာဗျာ။
IP နဲ့လဲ မတူဘူး ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော့် IP - public address ဆို တကယ်နေတာက တခြား၊ သူပြတဲ့ မြို့က တခြား။ ပုံမှန် Browser မှာ No Tracking tick လုပ်ထားရုံနဲ့ နေရာ အမှန် မပြဘူး။ ဥပမာ - ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ public IP - မြို့က ဧရာဝတီ ဆိုပါစို့။ ပုံမှန် No Tracking tick လုပ်ပြီး browse လုပ်ရင် ဧရာဝတီ results နဲ့ပဲ လာတယ်။
Ask Location ကြတော့ permission grant လုပ်လိုက်တာနဲ့ ရန်ကုန် results ဖြစ်သွားရော။ ဘယ်လို detect လုပ်မှန်းကို မသိတော့ဘူး။
ကိုဂျိန်း, ကိုလင်း1z, မျိုးဟန်ထက်, bagothar85, pannuko, tu tu, yelinoo
Privacy အကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးနေကြပြီ ဆိုတော့ ကိုဘုရင့်နောင် ၁ ယောက် ဘာတွေ ကြံစည်နေသည်မသိ...
ကိုဘုရင့်နောင် ပြောသလို ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေကို ကိုယ့်စက်မှာ encrypt လုပ်ထားပေမဲ့ အဲဒီစက်ကပျက်သွားရင်သွားရော....။ တလောကလေးတင် ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ၁ယောက်က သူ့စက်မှာ hardisk က ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။ boot လုံးဝမတက်တော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ diagnostic run လိုက်တော့ hard drive က failed ပါတယ်ဆိုပြီး ပြရော။ ကံကောင်းတာက အာမခံကျန်သေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ HP customer service ကိုဆက်သွယ်တော့ ဟိုဘက် အဲဒီ laptop ကို သူတို့ဆီလှမ်းပို့ပေးဘို့ပြောတယ်။
အဓိက ပြဿနာက သူ့ရဲ့ data တွေကိုဒီအတိုင်း scan ဆွဲပြီး သိမ်းထားတာ။ အဲဒီတော့ သူလဲ မပေးရဲဘူး။
နောက်တော့ hard drive ကိုဘဲ လှမ်းပို့ပေးဘို့ပြောပြီး ကိုယ့်ဟာကို ဖြုတ်တက်လဲ မယ်လိုလုပ်လိုက်ရတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ data တွေကို cloud မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် external drives တွေဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုဘဲသိမ်းသိမ်း အရေးကြီးတယ်ဆိုရင် သိမ်းထားတဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ device တွေကို မသုံးဘဲထားတာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ကျနော်ထင်တာပြောရရင် smart mobile devices တွေမှာ AGPS စနစ်ကပါရှိထားပြီးသားဆိုတော့ satellite navigation ကနေဘာညာဘာညာ ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်တာဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဥပမာ compass app တွေလဲ လုပ်ဆောင်ပုံတွေနဲ့ ထပ်တူလောက်သွားကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒီ app တွေသုံးရင်လဲ အိမ်လ်ိပ်စာကအစ အသေးစိတ် ပေါ်တယ်လေ။
အဲဒါဆိုရင် Android မှာ location Services ထဲက Google's location sevice, GPS Satellites , location & Google Search တွေကို ဖြုတ်ထားရင်တော့ compass လေးက်ိုတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးလိုက်တာနဲ့သူ့ဟာသူအားလုံးကို ပြန်ဖွင့်သွားကြတယ်။
ကျနော်တို့ကြတော့ အဲဒီလို location services တွေပေါ်တာကို တော်တော်အသုံးဝင်တယ်။ တစ်နေရာရာရောက်သွားလို့ ဒီနားမှာဘာစားသောက်ဆိုင်ရှိလဲ.....ဘယ်နေရာမှာ တည်းခိုခန်းရှိသလဲ စတဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ informations တွေကို အချိန်တိုအတွင်း သိရှိနိုင်တယ်။ အဲဒါတွေထက်ဆိုးတာက Google Map မှာ location history ရှိနေတာကတော့ တကယ့်ကွိုင် ။ ဘယ်နေရာကိုမသွားခဲ့ပါဘူးလို့ ငြင်းလို့မရဘူးနော်။ ပိုဆိုးတာက အချိန်အတိကျပါ ပြတာဗျာ..... ။
ကို g00gle ပြောသလိုဘဲ။ ကျနော်ဆိုရင် ကျနော့်ရဲ့ ဒေတာတွေကို google drive မှာသိမ်းထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ account ကိုလုံးဝ မထိဘူး။ သုံးလဲမသုံးဘူး။ လိုအပ်မှာသာလျှင် download/upload လုပ်တာ။ တော်ရုံကတော့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ကိုထားထားတာ။ အရေးကြီးတာကိုး။ အဲ....စကားဝှက်ကိုတော့ မမေ့အောင် မနဲမှတ်ထားရတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ကိုလင်း1z အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, မြင့်မိုရ်, bagothar85, g00gle, pannuko, tu tu, yelinoo
ဘာ မှ မ ကြံ ပါ ဘူး ဗျာ။
ကိုဘုရင့်နောင် ပြောသလို ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေကို ကိုယ့်စက်မှာ encrypt လုပ်ထားပေမဲ့ အဲဒီစက်ကပျက်သွားရင်သွားရော....။
Encrypt backup လုပ် ထား ရ မှာ ပေါ့။ စတ် ပျက် တာ က တော့ encrypt လုပ် လုပ် မ လုပ် လုပ် ပျက် ချင် ပျက် မှာ ပဲ ကိုး။ encrypt မ လုပ် ထား ရင် တော့ recovery ပို လွယ် မ လား မ သိ ဘူး။
အဲဒါတွေထက်ဆိုးတာက Google Map မှာ location history ရှိနေတာကတော့ တကယ့်ကွိုင်။ ဘယ်နေရာကိုမသွားခဲ့ပါဘူးလို့ ငြင်းလို့မရဘူးနော်။ ပိုဆိုးတာက အချိန်အတိကျပါ ပြတာဗျာ.....
google services သုံး လို. ချင် ရင် ကို. အ ကြောင်း အ ကုံ ကို သိ နေ ပီ။ google NOW ဆို တာ လဲ ကို. web search histroy, location history, email, calendar, တွေ အ ကုန် လုံး က data တွေ ပေါင်း ပီး function လုပ် တာ ကိုး။ ကို. အ ကြောင်း အ ကုန် သိ ပီ ပေါ့။
international police monitor လို. တောင် ထင် ရ တယ်။ နိုင် ငံ တွေ မှာ က CCTV လောက် နဲ. ကို ဘယ် သွား တယ် ဆို တာ trace နိုင် တယ် ။
Microsoft လဲ သူ့ bing serach, map, mail, windows 8 desktop/mobile တွေ ကို account နဲ. သုံး ခိုင်း လို. က တော့ info တွေ အ ကုန် ရ မှာ ပဲ။
ကိုဂျိန်း, ကိုလင်း1z, မြင့်မိုရ်, g00gle, tu tu
အရင်က ဖတ်ဖူးတာလေး သတိရလို့။ Adobe Reader7မှာ Tracking ပါတယ်။ Pop-up လေးနဲ့ ပြတာ။
နောက်ပိုင်းလဲ ပါဖို့များတယ်။ အကုန်က Closed source ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိတာ။
Richard Stallman ကြီး ဇီဇာကြောင်ရင်လဲ ကြောင်စရာပဲ။
Firefox - PDF.js သုံးရမယ်နဲ့ တူတယ်။
DuckDuckGo ကနေ Tracking ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘာတွေ သုံးသင့်လဲ ရေးထားတဲ့ ဆိုက်လေးပါ။ Common tracking methods တွေ အကြောင်းကိုလဲ လင့်နဲ့ ရေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသော Internet Connection များအကြောင်း!!! poekaunglay87 Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 48 07-04-2014 12:37 PM
Internet Explorer9နှင့် သူ၏ အနာဂတ် KznT Software များဆိုင်ရာ 10 22-09-2012 02:24 AM
Internet Cyclone kyawminkhoung Applications523-11-2011 10:59 AM